पर्साका ९ जनाले जिते कोरोना - Parichay Network
पर्साका ९ जनाले जिते कोरोना
परिचय नेटवर्क द्वारा	 १० जेष्ठ २०७७, शनिबार २०:१२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पर्साको वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालबाट शनिबार ९ जना कोरोना संक्रमित कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन् । नारायणी र गण्डक अस्पतालमा उपचारार्थ ९६ जना संक्रमितमध्ये शनिबार ९ जना डिस्चार्ज भएका हुन् ।
‘संक्रमणलाई जित्ने ९ जनालाई डिस्चार्ज गरिएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट (मेसु) डा. मदन कुमार उपाध्यायले बताए । डिष्चार्ज हुनेहरुमध्ये पर्साका ३, रौतहटका ३, बाराका २ र एक भारतीय नागरिक गरी ९ जना पुरुष रहेको मेसु उपाध्यायले बताए । पर्साको वीरगन्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा ७१ र गण्डक अस्पतालमा २५ गरी ९६ जना संक्रमित उपचार गराइरहेका थिए। तिनीहरुमध्ये नारायणी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका ७१ जना मध्येबाटै शनिबार ९ जना निको भएर डिस्चार्ज गरिएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ ।
९ जना डिस्चार्ज भएपछि नारायणी अस्पतालमा अब ६२ जना मात्र संक्रमित बाँकी रहेका छन्। उता नारायणी अस्पताल कै नामले संचालित गण्डक अस्पतालमा रहेका २५ जना संक्रमित भने अहिलेको डिस्चार्जको सूचीमा नपरेको अस्पतालले जनाएको छ । डिस्चार्ज हुनेहरुमा वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. २, का ३० बर्षीय, वडा नम्बर ३ का ५० बर्षीय वडा नम्बर १६ का ५१ बर्षीय पुरुष छन्। त्यसै गरी बाराको सिम्रौनगढ ४ का ३१ बर्षीय, जितपुर सिमरा १ का ४३ बर्षीय पनि पुरुष नै रहेका हुन् ।
शनिबार डिष्चार्ज हुनेहरु रौतहट गुजरा नगरपालिका ५ का ३५ बर्षीय, इशनाथ नगरपालिकाका १९ बर्षीय, बृन्दावन नगरपालिकाका २४ बर्षिय पुरुष र तथा ४२ बर्षीय एक भारतीय पनि पुरुष नै रहेका छन् । डिस्चार्ज हुनेहरु मध्ये दुई जना गएको बैशाख १४ गते डिष्चार्ज भई पुनः बैशाख २१ गते भर्ना भएकाहरु मध्ये रहेको अस्पतालले खुलासा गरेको छ। वीरगन्जमा डिस्चार्ज भएका ९ सहित कोरोनालाई जितेर अहिलेसम्म नेपालभर डिस्चार्ज हुनेको संख्या ७९ पुगेको छ।